News Collection: धन्दा पुरुष वेश्याको
काठमाडौंको रानीपोखरी र रानीपोखरी छेउको गणेश मन्दिर। यहीँ भेटिन्छन्, 'मिसन सोल्टी'। जिम गरेको कसिलो जिउ र कोरियन शैलीको जेल लगाइएको उनको केश देखेर जो-कोही आकषिर्त हुन सक्छन्। आखिर उनको उद्देश्य पनि त्यही हो। उनी हुन् सहरका नामी यौनकर्मी। सडकमा रुघेँको देख्दा 'मिसन सोल्टी' सजिलै हात पर्छन् भन्ने लाग्न सक्छ,। भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्, उनी चानचुने यौनकर्मी होइनन्। उनीसँग एक रात बिताउन पूरा १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। केही वर्षअघि यही गणेश मन्दिरमा उनी आफ्नो यौवनको मोल ५ सय राख्थे। अरू सामग्रीको सय प्रतिशत मूल्य बढ्दा उनको भाउ हजार प्रतिशतले बढेको छ। छेऊमै १२ वर्षदेखि मकै पोल्ने आशाकुमारी पाखि्रन भन्छिन्, 'यो मोरो, पहिले मागेर मकै खान्थ्यो, छोरो जस्तो लागेर दिन्थें, अहिले बोल्दा पनि पैसा लाग्छ जस्तो गर्छ।'
यौनकर्मी भन्नेबित्तिकै मानिसको मनमा महिलाको तस्बिर आउँछ। सञ्चारमाध्यममा पनि महिला यौनकर्मीकै बारेमा चर्चा हुन्छ। प्रहरी एवं गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि महिला यौनकर्मीलाई पक्रने र उद्धार गर्ने लुकामारी खेलिरहन्छन्। यो कोलाहलमा पुरुष यौनकर्मीहरू भने मज्जाले आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन्। उनीहरूलाई न प्रहरीको डर छ, न गैरसरकारी संस्थाहरूकै झन्झट।
रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापा एक साँझ टहल्दै रानीपोखरी पुगेकी थिइन्। चुरोट पिइरहेको एउटा युवकले अचानक चुरोट फ्याक्यो र मुख अर्कोतिर फर्कायो। २२-२५ वर्षीय युवक यसरी आफूसँग अचानक डराएको देख्दा थापा अचम्ममा परिन्। युवकको छेऊ पुगेर ध्यानपूर्वक हेर्दा पो थाहा भयो, ती युवक अरू कोही नभएर पाँच वर्षअघि एउटा क्याबिन रेस्टुराँमा भाँडा मोल्ने भाइ रहेछन्। ठमेलको क्याबिन रेस्टुराँमा काम गर्ने महिलाहरूको उद्धार गर्न जाने क्रममा त्यहाँ काम गर्ने भाइसँग उनको परिचय भएको थियो। अहिले हतारमा डराएर चुरोट फ्याक्ने युवक तिनै थिए। पाँच वर्षपछि लक्का जवान भएका ती युवक त्यसरी नडराएका भए मेनुकाले चिन्न सक्ने थिइनन्। डराउनुको कारण सो धखोज गर्दै जाँदा थाहा भयो, उनी पनि पुरुष यौनकर्मी रहेछन्। तीन वर्षदेखि उनी सडकमै ग्राहक खोज्ोर त्यसबापत प्राप्त हुने पारिश्रमिकले आफ्नो परिवारको पेट पाल्छन्। उनकी श्रीमती र एक छोरा छन्। छोरा सहरको एउटा चर्चित निजी विद्यालयमा पढ्छन्। 'संस्थामा भएका बहिनीहरूमार्फत सहरमा पुरुष यौनकर्मी प्रसस्तै छन् भन्ने सुनेकी थिएँ।' साप्ताहिकसँगको भेटमा मेनुकाले भनिन्, 'त्यही भाइ पनि यौनकर्मी भएको थाहा पाउँदा मलाई अचम्म लाग्यो।'
के भन्छन् जिगोलो ?
पुरुष यौनकर्मीहरू आफूलाई जिगोलो भनेर चिनाउँछन् । विदेशी पर्यटकहरूको संगतमा उनीहरूले यो नाम पाएका हुन्। धेरैजसो यौनकर्मीले एक्ला-एक्लै ग्राहक खोजे पनि जिगोलो समूहका ७ जनाले भने आफ्ना ग्राहक एकअर्कालाई चिनाउने गरेका छन्। केही महिला ग्राहकले 'पठ्ठा' छानेर मात्र लान थालेपछि उनीहरूले आफ्नो समूह बनाएका हुन्। समूहका नाइके हुन्, 'मिसन सोल्टी।' उनलाई भोटाहिटी क्षेत्रमा त्यही नामले चिनिन्छ।
'कहिलेकाहीँ केटाहरूले हामीलाई दुःख दिने भएकाले समूह बनाएको हुँ।' खास नाम उल्लेख नगर्ने कडा चेतावनी दिँदै मिसन सो ल्टीले भने, 'कहिलेकाहीँ मेमहरूको ढुकुटीमा डुबेको पैसा पनि उठाइदिनुपर्छ। त्यसका लागि केटाहरू चाहिन्छ। मेमसँग बाहिर गएका बेला के टाहरूलाई आफ्नो काम जिम्मा दिर्नुपर्ने भएकाले पनि समूह बनाएको हुँ।' मिसन सोल्टीलाई पहिलेदेखि चिनेको बताउने आशाकुमारी पाखि्रनका अनुसार कहिलेकाहीँ यो समूहसँग बाहिरी युवाहरूको झगडा पर्छ। यद्यपि झगडा के विषयमा हुन्छ भन्ने कुरा भने उनले बुझेकी छैनन्। 'आला-काँचा छन्, सडकमै हुर्किएका हुन्, त्यही भएर झगडा गर्छन्।' आशाकुमारी भन्छिन्, 'कहिलेकाहीँ उसलाई लिन नीलो गाडी आएको देख्छु, तर गाडीमा किन जान्छ, चासो दिन्न।'
मिसन सोल्टी र उनका समूहलाई मेमहरूले छानेर लाने गरेका छन्। ग्राहकले छानेपछि उनीहरूलाई कहिले क्यासिनो लान्छन् भने कहिले सीधै आफ्नै घरमा पुर्‍याउँछ। 'सँगै रक्सी खाइन्छ, त्यसपछि उनीहरूले भनेअनुसार गर्नुपर्छ।' मिसन सोल्टी भन्छन्, 'पहिले त मलाई के-के गराएको होला भनेर रिस पनि उठेथ्यो, तर अहिले बानी भयो।' मिसन सोल्टीका अनुसार उनीहरूले महिला ग्राहकलाई जीउमा तेल लगाइदिने, जीऊ दुखेको बेला थिचिदिने एवं मुख मैथुनसम्म गरिदिनुपर्छ। उक्त समूहले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि आफ्नो ग्राहक बनाएको छ। यद्यपि पुरुष ग्राहकसँग उनीहरूले बढी शुल्क लिन्छन्। '१० हजार रुपैयाँ नदिई जान्न।' अलि ठाडो भाषामा मिसन सोल्टीले भने, 'पुरुष ग्राहकसँग जाँदा सास्ती हुन्छ, त्यसैले दाम बढाएको।' पहिले उनी पुरुष र महिला ग्राहकका लागि पाँच सय रुपैयाँ मात्र लिन्थे। अहिले सकेसम्म महिला ग्राहक खोज्ने नभेटेको अवस्थामा मात्र पुरुष ग्राहकसँग जाने उनीहरूको नियम छ। 'कुइरे र कुइरिनीसँग अलि बढी रमाइलो हुन्छ।' मिसन सो ल्टीभन्दा केही कम उमेरका अर्का युवाले थपे, 'उनीहरू पैसा पनि बढी दिन्छन्, माया पनि बढी गर्छन्।' मिसन सोल्टी र उनको समूहका धेरै जसो ग्राहक ४० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला छन्। ग्राहकले कहिलेकाहीँ कम्पाउन्ड भएको घरमा लान्छन् भने कहिलेकाहीँ नगरकोटतिरका होटलतिर। 'मेमहरूसँग पोखरा र सौराहा पनि पुगेको छु, एकपल्ट इन्डिया पनि गएँ।' आफ्ना ग्राहक सम्झदै मिसन सोल्टीले फुत्काए, 'गौरा मेमले भने मलाई आफ्नै लोग्ने हो भनेर चिनाउनुहुन्छ।'
कति छन् पुरुष यौनकर्मी
सन् २००१ मा ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीका अध्यक्ष सुनिलबाबु पन्तले लन्डन स्कुल अफ हाइजिन ट्रोपिकल मेडिसिनका लागि नेपाली समलिङ्गीहरूका बारेमा विशेष अध्ययन गरेका थिए। उक्त अध्ययनको उद्देश्य नेपालमा समलिङ्गीहरूको अवस्था एवं उनीहरूमार्फत एचआइर् भीको संक्रमण कस्तो छ भन्ने थियो। अध्ययनका क्रममा उनले प्रसस्त पुरुष यौनकर्मी फेला पारे। केही समलिङ्गी यौनकर्मीसँगै पुरुष यौनकमीर् को उठबस हुने र उनीहरूले गराउने असुरक्षित गुदा मैथुनले समलिङ्गी र पुरुष यौनकर्मीहरूमा एचआईभी सर्ने सम्भावना तीव्र रहेको उक्त सर्वेक्षणको निष्कर्ष थियो। यद्यपि उक्त सर्वेक्षणले नेपालमा कति पुरुष यौनकर्मी छन् भन्ने तथ्याङ्क दिन सकेको थिएन। 'अरू सहरको कुरा त मलाई थाहा छैन, काठमाडौंमा प्रसस्तै पुरुष यौनकर्मी छन्।' ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीमा कर्यरत समलिङ्गी भूमिका श्रेष्ठ भन्छिन्, 'उनीहरू महिला वा समलिङ्गी यौनकर्मी जस्तो ठूलो समस्यामा पर्दैनन्, त्यसैले हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहदैनन्।' भूमिकाका अनुसार यस्ता पुरुष यौ नकर्मीलाई सहरका धनाढ्य एवं पाका महिलाहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। श्रीमान्बाट असन्तुष्ट, श्रीमान् बिदेसिएका कारण एक्लिएका एवं कामुक प्रकृतिका महिलाहरू नै उनीहरूका ग्राहक हुन्। त्यस्ता महिलाहरूले छानीछानी पुरुष लाने भएकाले भोटाहिटीदेखि रानीपोखरी क्षेत्रमा साँझ दर्जनौं किशोर एवं युवा यौनकर्मी भेटिने गरेका हुन्।
यौनकर्मीको परिभाषाअनुसार कसैले आफ्नो व्यक्तिगत मनोरञ्जन वा यौनसन्तुष्टिका लागि कुनै महिला, पुरुष वा समलिङ्गीलाई कुनै उपहार वा नगद दिएर प्रयोग गर्छ भने त्यो प्रयोग हुन स्वीकार गर्ने व्यक्ति नै यौनकर्मी हो। यो परिभाषाअनुसार नगद मात्र होइन, कुनै उपहार एवं विशेष लाभको लोभमा परेर व्यक्तिगत सन्तुष्टि पूरा गर्ने व्यक्ति पनि व्यक्ति यौनकर्मी हुनसक्छ। 'धेरैजसो यौनकर्मी युवा कुनै धनाढ्य महिलाको एकलौटी रखौटो हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई आफू यौनकर्मी हुँ भन्नेसमेत थाहा हुँदैन।' रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापा भन्छिन्, 'आजका महिला धेरै स्मार्ट भैसकेका छन्। कतिपय महिला आवश्यकता र कतिपय रमाइलोका लागि यस्ता युवाको प्रयोग गर्छन्।' कतिपयले सुरक्षा र सन्तुष्टि दुवैका लागि आकर्षक रकम र गाडी दिएर स्मार्ट पुरुषहरूलाई आफ्नो बनाएर राखेको पाइएको छ। होटल र रेष्टुराँका बाउन्सर तथा मोडलहरू मात्र होइनन्, केही युवा सेलिब्रेटीलाई पनि धेरै महिलाले यौनकर्मीका रूपमा प्रयोग गरेका छन्।
सन् २०१० मा नेपाली सन्तोष गुरुङ् र दुई थाइ अनुसन्धानकर्ता ओरन्त बेचेन र अपुरोनले गरेको अध्ययनले पनि काठमाडौंमा प्रसस्त पुरुष यौनकर्मी रहेको पुष्टि गरेको थियो। एउटी महिलाले केही समय प्रयोग गरेर छाडेपछि त्यस्ता पुरुष फेरि त्यस्तै महिलाहरूको खोजीमा रहँदा पूर्णरुपमा यौनकर्मी हुने गरेको पाइएको उक्त सर्वेक्षण-प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता युवाहरूलाई गुदा मैथुन मनपराउने पुरुषहरूले बढि पैसा दिएर प्रयोग गर्ने र उनीहरूमा एचआईभीको संक्रमणको सम्भावना प्रवल गरेको उक्त सर्वेक्षण-प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि महिला यौनकमीर् मा भन्दा पुरुष यौनकर्मीहरू कन्डम प्रयोग गर्न सचेत देखिन्छन्। एसिया जर्नल अफ पब्लिक हेल्थको जुलाई-डिसेम्बर अंकले पनि काठमाडौं उपत्यकामा पुरुष यौनकर्मीहरू बढिरहेको तथ्य पेश गरेको छ। उक्त जर्नलले पनि नेपालमा पुरुष यौनकर्मीहरूको संख्या तोक्न सकेको छैन। सन् २०१० मै सिविनले गरेको सर्वेक्षणमा सडक बालबालिकाहरूलाई विदेशी एवं स्वदेशी पुरुष-महिलाहरूले पैसा वा खानेकुरा दिएर यौनकर्म गराउन थाल्छन्। सजिलो गरी पैसा आउने कार्य भएको देखेपछि उनीहरू सजिलै यौनकर्मी हुन्छन्। यहि बानीका कारण धेरैजसो सडक बालकपछि गएर पुरुष यौनकर्मी हुने गरेको पनि पाइएको छ।
कसरी प्रयोग हुन्छन् ?
विकीपीडियाको अंग्रेजी संस्करणमा नेपाललाई पुरुष यौनकर्मीहरूका लागि सबैभन्दा आकर्षक देश भनिएको छ। विकीपीडियाको मेल सेक्स वकर् र शीर्षकमा उल्लेख भएअनुसार पदयात्रा मनपराउने अमेरिकी एवं युरोपियन युवतीहरूले नेपाली कलव्यायलाई आफ्नो यात्रामा लाने गरेका छन्। विदेशी युवतीहरूले पैसा तिरेर घुमाउन लैजाने र आफूले चाहेअनुसारको सेवा सुविधा लिने देशहरूमा नेपाल पहिलो पङ्तिमा पर्छ। पुरुष यौनकर्मी खोजेर रमाइलो गर्न विदेशबाट आउने ग्राहकको सूचीमा नेपालपछि मोरक्को, फिजी, इक्वेडर तथा कोस्टारिका छन्। पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार विकीपीडियामा नेपालका युवालाई केही अतिरञ्जित रुपमा व्याख्या गरिएको छ। 'नेपाली गाइडसँग युरोप-अमेरिकी युवतीहरू स्वैच्छाले यौन सम्पर्क गर्छन्, त्यसैलाई अतिरञ्जित गरिएको हो।' पर्यटन व्यवसायी राजन न्यौपाने भन्छन्, 'युवतीहरूले उनीहरूलाई घुमाएबापतको पारिश्रमिक दिएका हुन्, न कि यौन सन्तुष्टि दिएबापत।' यति हुँदा हुँदै पनि विशेष सेवा गरेबापत महिला पर्यटकहरूले नेपाली युवाहरूलाई ठूलो टिप्स दिने गरेका कुरा भने उनी स्वीकार गर्छन्। 'कतिपय भाइहरूले आफूलाई विदेशी युवतीले प्रयोग गरेको थाहै पाउँदैनन्। किनभने उनीहरूलाई पैसा र रमाइलो दुवै प्राप्त हुन्छ। कतिपय युवाले यही कारणले विदेश जाने मौका पनि पाएका छन्।' न्यौपाने भन्छन्, ' खुला विचार भएका विदेशीहरू लजालु नेपाली युवाप्रति आकषिर्त हुने गरेका छन्।' एक वर्षअघि ठमेलको एक होटलमा बस्न आएकी अमेरिकी युवतीलाई नेपाली होटल मालिकले जवरजस्ती गरेको भन्दै प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिइन्। कमल कूस्मा थारु नामका ती युवाले प्रहरीको बयानमा अमेरिकी युवतीहरू सजिलै यौन सम्पर्क गर्न मान्ने र कतिपयले पैसा दिने गरेको बताएका थिए। उनको भनाइले पनि ठमेल क्षेत्रमा आउने कतिपय महिला पर्यटकहरू पुरुष यौनकर्मीको खोजीमा हुने गरेको पुष्टि गरेको थियो। प्रहरी प्रतिवेदनमा भने कतै पनि पुरुष यौनकमीर् का बारेमा उल्लेख छैन। नेपालमा गैरकानुनी मानिने यौनकर्म महिला र पुरुष दुवैका लागि उत्तिकै दण्डनीय भए पनि प्रहरीले अहिलेसम्म क्याबिन रेस्टुराँ, मसाज एवं डान्स रेस्टुराँहरूबाट महिलालाई मात्र पक्रने गरेको छ। महिलासँगै पुरुष पनि यौनकर्मी हुनसक्छन् भन्ने कुरा प्रहरीले थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गरेको छ।
रक्षा नेपालकी अध्यक्ष थापाका अनुसार पुरुष यौनकर्मीहरू विदेशी महिलाको खोजीमा बढी रहे पनि नेपाली पुरुष प्रयोग गर्ने नेपाली महिलाह रूको सङ्ख्या पनि ठूलो छ। यस्ता यौनकर्मीहरू सकेसम्म विदेशी महिलालाई आकषिर्त गर्ने प्रयास गर्छन्, उनीहरू नेपाली महिलालाई पनि उत्तिकै सेवा दिइरहेका हुन्छन्। 'आफ्नो श्रीमान्बाट विशेष किसिमको सेवा नपाउने घनाढ्य महिलाहरू पुरुष यौनकर्मीलाई प्रयोग गर्छन्।' थापा भन्छिन्, 'पुरुषहरूमा यौन सन्तुष्टिको अधिकार आफ्नो मात्र हुने खालको भावना भएका कारण श्रीमतीको इच्छाको ख्याल राखिँदैन। त्यसैले पनि कतिपय महिलाले बाहिरी पुरुषबाट यौन सन्तुष्टि लिने गरेका छन्।' चर्चित गायक, मोडल र कतिपय नायकको नाम पनि कहिलेकाहीँ विशेष एवं धनाढ्य महिलासँग जोडिनुको कारण पनि यही हो। यस्ता सेलिब्रेटीलाई ती महिलाले गाडी, आइफोन एवं अप्ठारो परेका बेला खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको चर्चालाई पनि कतिपयले यसैसँग जोड्ने गरेका हुन्। 'मैले बुझेअनुसार ४० वर्ष कटेका महिलालाई उनीहरूको श्रीमान्ले पहिले जस्तो माया गर्न छाड्छन्। उनीहरू परस्त्रीसँग हिँडेको सुन्न थाल्छन्।' थापा भन्छिन्, 'त्यसको प्रतिशोध वा मायाको अभावमा महिलाहरू पनि पुरुष यौनकर्मी खोज्न थाल्छन्।' मनोविज्ञ करुणा कुँवर पनि आजभोलि महिलाहरू श्रीमान्बाहेक बाहिरी पुरुषतर्फ आकषिर्त हुन थालेको कुरा स्वीकार गर्छिन्। 'परपुरुषसँगको सम्बन्धका कारण हुने तनावका धेरै मुद्दा मकहाँ पनि आउने गरेका छन्, तर ती पर पुरुष यौ नकर्मी नै हुन् वा व्यायफ्रेन्डमात्र हुन् भन्ने कुराको भने मैले अध्ययन गरेकी छैन।' कुँवर भन्छिन्, 'सहरमा पुरुष यौनकर्मीबाट सेवा लिने महिलाको सङ्ख्या बढिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो।'
नेपालमा पुरुष यौनकर्मीको चर्चा नयाँ भए पनि विदेशमा भने यसलाई पुरानो परम्परा मानिन्छ। इन्साइक्लोपेडिया अफ होमोसेक्सुअलका अनुसार प्राचीन ग्रीसमा आकर्षक दासहरू राजकुमारी एवं महारानीको यौनइच्छा पूरा गर्न खरिद गरिन्थ्यो। हिब्रु भाषामा लेखिएको बाइबलमा पनि पुरुष दासलाई यौनकार्यमा प्रयोग गरिएको कुरा उल्लेख छ। चर्चित ग्रीस दार्शनिक फेडो इलिस युवा अवस्थामा पुरुष यौनकर्मी थिए। चचिर् त दार्शनिक प्लेटोको संगतमा आएपछि मात्र उनले यौन व्यवसाय छाडेका थिए। आजभोलि अमेरिकाका न्युयोर्क, लस एन्जेलस, सन् फ्रान्सिस्को जस्ता सहरका निश्चित गल्लीहरू पुरुष यौनकर्मीका लागि छुट्याइएको छ। जिगोलो अथवा रेन्ट ब्याइ भनिने यस्ता पुरुष संसारभरि प्रसिद्ध छन्। न्युयोर्कको फिफ्टी थ्री स्टि्रट, लस एन्जेलसको सान्ता-मोनिका बोलिभर्ड, लन्डनको पिकाडिली सर्कस एरिया, सनफ्रान्सिस्को कन्ट्री रुट अफ ५२६ न्यू-जसीको फ्राङ्लिन क्षेत्र पुरुष यौनकर्मीहरूको चर्चित क्षेत्र हो। सौखिन महिलाहरू उक्त क्षेत्रमा गएर आफूलाई मनपरेका युवालाई केही समयका लागि खरिद गर्न सक्छन्। महिलाहरू आफैं नगएको अवस्थामा इन्टरनेट, फोन एवं स्थानीय वयस्क टेलिभिजन च्यानलको माध्यमबाट यौनकर्मी छान्न सकिन्छ। यसका लागि छुट्टै दलाल कम्पनीहरू पनि खडा गरिएका छन्। विकीपीडियाका अनुसार जापान, अफगानिस्तान, जर्मनी, इटली एवं ब्राजिलजस्ता विकसित देशमा महिलाको आर्थिक स्तरमा आएको ठूलो सुधारका कारण पुरुष यौनकर्मीहरूको माग बढेको छ। थाइल्यान्डको फुकेटमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो पुरुष वेश्यालय 'ग्रोथल' छ भने इन्डोनेसिया, ग्रीस, स्पेन जस्ता देशमा पनि ठूलो संख्यामा पुरुष यौनकर्मीहरू थपिइरहेका छन्। ती देशहरूमा स्थानीयबाहेक भारत, चीनजस्ता मुलुकका पुरुषहरू पनि स-सुल्क सेवाका लागि पुग्ने गरेको एजेन्सीहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महिनाको ५० हजारसम्म कमाउँछु
मिसन सोल्टी, पुरुष यौनकर्मी
कति भयो यो काम गर्नुभएको ?
धेरै भयो। ए होइन, होइन, दुई चार वर्ष जति भयो।
सबैभन्दा पहिलो ग्राहकको थियो ?
कुइरे थियो। त्यसले माया गरेर कपडा किनिदियो। होटलमा लगेर खाना ख्वायो। आफ्नै कोठामा लगेर नुहाइदियो। त्यही हो, मेरो पहिलो ग्राहक।
कुइरेसँग जाँदा यौनकर्म गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो ?
सिनियर दाइहरूले 'यो खातेसँग तँ जा' भनेर पठाएका थिए अलि गरिब थियो होला। दाइहरूले सबै कुरा सिकाएका थिए।
महिला ग्राहक रमाइला कि पुरुष ?
मेमहरू नै रमाइला। मेमहरूले यसरी खानुपर्छ, यसरी लगाउनुपर्छ भनेर सिकाउनु हुन्छ। मलाई जिम गर्नुपर्छ, राम्रो भएर हिँड्नुपर्छ भनेर मे महरूले नै सिकाएका हुन्। एकजना मेमले त म नराम्रो भएर हिँडेको देख्नुभयो भने एक महिनासम्म फोन गर्नुहुन्न।
को मेम ?
नाम भन्न मिल्दैन।
तपाईंका कति जना महिला ग्राहक छन् ?
७-८ जना जति नियमित हुनुहुन्छ। उहाँहरू मलाई फोन नगर्नू, कसैलाई नभन्नू भन्नुहुन्छ। नाम पनि भन्न मिल्दैन, कति जना छन् भन्न पनि मिल्दैन।
अनि कसरी भेट हुन्छ त ?
उहाँहरूलाई हाम्रो जङ्सन थाहा छ। धेरैजसो चाहिँ आफैं फोन गर्नुहुन्छ। त्यही भएर सधैं चिटिक्क परेर बस्नुपर्छ।
सबैभन्दा बढी कसले माया गर्छ ?
गौरा मेमले। उहाँले मलाई यो मेरो कान्छो लोग्ने हो भनेर अरू मेमहरूलाई चिनाउनु हुन्छ। सबैजना हाँस्छन्, मलाई पनि खुसी लाग्छ।
महिनाको कति कमाइ हुन्छ ?
नियमित ग्राहकसँग यति नै भनेर लिन्न। जति दिनुहुन्छ, चुपलागेर लिन्छु। लोग्नेमान्छे र कुइरे-कुइरिनीसँग चाहिँ १० हजार चाहिन्छ भन्छु। कहिलेकाहीँ त महिनाको ५० हजार पनि हुन्छ।
उनीहरू समस्यामा छैनन्
भूमिका श्रेष्ठ, तेस्रोलिङ्गी एवं ब्लू-डाइमन्ड सोसाइटीकी कर्मचारी
तेस्रोलिङ्गी एवं महिला यौनकर्मीका समस्या सुनिदिने संस्थाहरू छन्, पुरुषका छैनन्, किन ?
किनभने उनीहरूमा समस्या छैन। भए पनि पुरुष प्रधान समाज भएकाले उनीहरू त्यसलाई गुपचुप राख्छन्। महिला र तेस्रोलिङ्गीमा कोही यौ नकर्मी हो भन्ने थाहा हुने बित्तिकै घरबाट निकालिदिने चलन छ। अझ तेस्रोलिङ्गीले त केही गर्नै पर्दैन, त्यसै अपराधी झैं व्यवहार हुन्छ र घरबाट निकालिन्छ। पुरुषले त्यही काम गर्दा साथी भाइले गर्व मान्छन्। त्यही काम पुरुषले गर्दा ठीक र महिला वा तेस्रोलिङ्गीले गर्दा बेठीक भन्ने समस्याका कारण महिला र तेस्रोलिङ्गीका समस्या सुन्न संस्थाहरू खडा भएका हुन्।
धेरैजसो पुरुष यौनकर्मीले आफ्नो पेसाप्रति गर्व गरेको पाइयो, महिला वा तेस्रोलिङ्गीमा त्यो भावना किन नआएको होला ?
सामाजिक संरचनाका कारण त्यसो भएको हो। त्यही काम पुरुषले गर्दा सामान्य मान्ने र त्यही काम अरूले गर्दा नराम्रो मान्ने घर-परिवार छ भने कसरी गर्व गर्न सक्छन् र ? प्रहरीले पनि अपमानजनक रूपमा उनीहरूलाई थुन्ने, सार्वजनिक काम गर्छ। जबकि पुरुष यौनकर्मीलाई कसैले छुदैन। यो भेदभाव कायम रहेसम्म कसैले पनि म तेस्रोलिङ्गी वा म यौनकर्मी भन्न सक्दैन।
प्रतिशतका आधारमा अध्ययन गर्दा धेरै तेस्रोलिङ्गीहरू यौनकर्मी भएको पाइयो, यसको कारण के होला ?
बाध्यताले उनीहरू यौनकर्मी भएका हुन्। तेस्रोलिङ्गी भएको थाहा हुने बित्तिकै धेरैजसो परिवारले आफ्ना सन्तानलाई घरबाट निकालिदिन्छन्। अचानक सडकमा आएपछि उनीहरू बाध्यतामा यो पेसा अंगाल्न पुग्छन्। फेरि हाम्रो संस्थाले सबैलाई आश्रय दिन पनि सक्दैन। आश्रय नपाएपछि विचराहरू के गरून् ?
पुरुष यौनकर्मीको मुद्दा उठाउने मै हुँ
नेपालमा महिला यौनकर्मीको कुरा धेरै हुन्छ, पुरुषको किन हुँदैन ?
यसका दुई कारण छन्। पहिलो उनीहरू महिला यौनकर्मी जस्तो चाँडै चिनिदैनन्, धेरैजसो व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा व्यापार गर्छन्। उनीहरूका ग्राहक निश्चित हुन्छन र फोन सम्पर्कका आधारमा उपलब्ध हुन्छन्। महिलाले जस्तो सडकमै बसेर ग्राहक खोज्नुपर्ने अवस्था अलि छैन। कम देखिने भएकाले चर्चा पनि कम भएको हो। अर्को महिलाले त्यही काम गर्दा गलत र पुरुषले गर्दा ठीक भन्ने मानसिकता छ। महिलाहरू आफ्ना सन्तान पाल्ने बाध्यतामा यो पेसामा आएका छन् तर पुरुषहरूको यो पार्टटाइम जबजस्तो भएकाले बाहिर आउँदैन। यद्यपि नेपालमा पुरुष यौनकर्मी बढिरहेका छन्, भनेर उनीहरूको मुद्दा उठाउने व्यक्ति भने मै हुँ। मैले कान्तिपुरमा लेख लेखेर यो कुरा बाहिर ल्याएकी हुँ।
महिला यौनकर्मीहरूको समस्या समाधान गर्न धेरै संघसंस्था खुलेका छन्, पुरुषको छैन, किन ?
किनभने हाम्रो समाज पुरुष प्रधान छ। महिलाले यौन व्यापार गर्दा उनीहरू अपहेलित हुन्छन्। त्यही काम पुरुषले गर्दा उल्टै माया पाइरहेका हुन्छन्। मैले चिनेको एकजना पुरुष यौनकर्मीलाई महिलाले घरमै लगेर खाना ख्वाउँछिन्। छोराछोरीलाई मामा भनेर चिनाउँछिन्। कुन पहिरन लगाउने-नलगाउने कसरी राम्रो भएर हिड्ने भनेर सिकाउँछिन्। जबकी त्यही काम गर्ने महिला यौनकर्मीले ग्राहकबाट कुटाइ खाएका उदाहरण धेरै छन्। कमजोर भएकै कारण महिला यौनकर्मीहरूको समस्याका लागि विभिन्न संघसंस्था खुलेका हुन्।
तपाईंको अध्ययनअनुसार पुरुष यौनकर्मीहरूको संख्या काठमाडौंमा कति होला ?
खास तथ्याङ्क छैन। जसरी कलगर्लहरूको तथ्याङ्क पाउन गाह्रो हुन्छ, त्यसैगरी पुरुष यौनकर्मीहरूको यकिन तथ्याङ्क पाउन सकिदैन। धेरै जसो पुरुष यौनकर्मीका निश्चित ग्राहक हुने भएकाले र ती कुरा बाहिर नआउने भएकाले थाहा हुँदैन। अध्ययनहरूले पुरुष यौनकर्मीहरू बढिरहेको चाहिँ देखाएको छन्।
पुरुष यौनकर्मीहरूको बजार कहाँ रहेछ ?
विदेशी पर्यटक एवं ४० वर्ष पार गरेका धनाढ्य महिलाहरू नै उनीहरूका ग्राहक हुन्। आफूचाहिँ बाहिर केटी खोज्दै हिँड्ने घरकी श्रीमती बूढी भै भनेर वास्ता नगर्ने श्रीमान्का कारण महिलाहरू पीडित हुन थाल्छन्। यो उमेरमा छोराछोरी हुर्केर स्कुल-कलेजमा व्यस्त हुन थाल्छन्। मायाको अभाव एवं श्रीमान्को इखका कारण महिलाहरूले पुरुष यौनकर्मी खोज्ने गरेका छन्। श्रीमान् विदेशमा हुने र सौखिन महिलाहरूले पनि यौनकर्मी पुरुषको खोजी गरेका छन्।